Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo kulan la qaatay Raisul wasaaraha Dalka Itoobiya (Daawo Sawirro)..23.10.17 : SalaanMedia
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo kulan la qaatay Raisul wasaaraha Dalka Itoobiya (Daawo Sawirro)..23.10.17
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaal ku maraya qaar ka mid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa gaaray magaalaa Addis Ababa.
“Mudane Raiisul Wasaare, waxaan si wayn u wada ogsoonahy in uu sii xoogeysanayo iskaashiga dhinaca amniga ee ka dhaxeeya labada dal. Waxaana rajeynayaa inaan sii xoojinno dadaallada aan ku bixineyno xasilloonida gobolka iyo horumarkiisa.”
Ra’iisul Wasaare Itoobiya ayaa uga tacsiyeeyey Madaxweyne Farmaajo dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay Qaraxii Soobe, waxa uuna ballan qaaday in uu garab istaagayo Dowladda Soomaaliya oo dhawaan bilaabeyso hawlgallo military oo dalka looga sifeynayo Al Shabaab.
« Cristiano Ronaldo beats Lionel Messi to win Fifa best male player award
liiska musuq- maasuqa Qandaraasyadii qabyaalada lagu qaybsaday, taa soo ah nusqaan iyo naaneys xumo kulmiye lagu xusuusan doono »